Cawaaqibka ka dhalan kara sharciga cusub (Epidemiloven). w/Mahad Yusuf - Somali en Codka Soomaalida DK en mp3(22/11 a las 10:45:00) 34:39 64416711 - iVoox
Cawaaqibka ka dhalan kara sharciga cusub (Epidemiloven). w/Mahad Yusuf - Somali
Descripción de Cawaaqibka ka dhalan kara sharciga cusub (Epidemiloven). w/Mahad Yusuf - Somali
Maalmahan waxay xisbiyada dawladda Denmark ay ka wada hadlayaan sharci cusub oo loogu tala galay xanuun saf-mar ah. (epidemilov) Madaama sharciga degdegga ah ee hadda jira u dhacayo Maarso 2021.